YEYINTNGE(ကနဒေါ): Monday, March 18
the medal of Grand Officer of the Order of the Crown ဆုကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အားပေးအပ်
ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ၏ ဂုဏ်သိက္ခာကြီးမားလှသော the medal of Grand Officer of the Order of the Crown ဆုကို ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mr Didier Reynders က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား နေပြည်တော်ရှိ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ရုံးခန်း၌ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ လာရောက်ပေးအပ်ခဲ့ (15-3-2013)
Burmese Democracy Leader aung san suu kyi received the medal of Grand Officer of the Order of the Crown from Belgium Foreign Minister Mr Didier Reynders at the capitol Naypyitaw (15-3-2013)
BY YeYint Nge ... 3/18/20130comment
by မာစတာ မင်း
တင်္နလာနေ့က သီရိလင်္ကာ မြို့လယ်ရထား ဘူတာတွင် လူမြင်ကွင်းနေရာမှာ
ရဟန်းတော်တစ်ပါးကို လူသုံးယောက် ရိုက်နက် ထိုးကြိတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။
BY YeYint Nge ... 3/18/2013 1 comment
မျိူးချစ် မြန်မာ့သားကောင်းများ ၏ စာမျက်နှာမှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
Heinn FiveStrings's photo.
ပြောစရာစကားတောင်မရှိတော့..နောက်ထပ် လုံးဝမပတ်သက်ချင်။ နောက်ထပ်လည်းမဖော်ပြစေရ။
၉၆၉ စတစ်ကာများ ကပ်ထားသော ဆိုင်ကယ် ၂ စီး လူ ၆ ယောက်ဖြစ် အင်းစိန်မြို့နယ် နံ့သာကုန်း ရပ်ကွက် တွင်း ရှိ ၉၆၉ တရားပွဲ သို့ ၂ရက်ဆက်တိုက် လာရောက်ပီး ၃ ရက်မြောက်နေ့ တွင် မသင်္ကာ သဖြစ် ရပ်ကွက်မှ ရဟန်းရှင်လူများစစ်ဆေးမေးမြန်းပီး လိုင်စင်မဲ့ ဆိုင်ကယ် ၂ စီး နှင့်အတူ လူ၆ယောက်အနက် ၃ ယောက်အား အင်းစိန်ရဲစခန်းသို့ အပ်နှံခဲ့ကြောင်း ... တစ်ဦးမှာ မှတ်ပုံတင် အတု ကိုင်ဆောင် ထားသော မော်လ၀ီ ဆရာဖြစ်ပီး ... နံ့သာကုန်း ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ခင်ဝင်းမှ အမူ ကို ရုတ်သိမ်းပေးရန် ရဟန်းရှင်လူ များအား ဖိအားပေးမူ့ များရှိကြောင်း သိရပါသည် ... ။
ပန်းရဲ့လမ်း ငြိမ်းချမ်းရေး ဂီတအဖွဲ့ လိုင်ဇာအဝင် မိုင်းကွင်းကို ဖြတ်သန်း
ပန်းရဲ့လမ်း ငြိမ်းချမ်းရေး ဂီတအဖွဲ့ မှ ကိုရဲလွင် (မစ္ဇျိမလှိုင်း) နှင့် ၇ဦးပါအဖွဲ့ကို တပ်မတော်သား
များက မတ်လ ၁၅ရက်နေ့ ညနေ ၅နာရီ မိနစ် ၄၀ခန့်က လိုင်ဇာအဝင် မိုင်းကွင်းကို ဖြတ်သန်းရန်
ရန်ကုန်မြို့မှာ ဘင်္ဂလီကုလားများမှ လှုံဆော်စာများ ဖြန့်ဝေ၊
Friday, March 15, 2013 ရန်ကုန်မြို့မှာ ဘင်္ဂလီကုလားများမှ လှုံဆော်စာများ ဖြန့်ဝေ၊ ရန်ကုန်သို့ ဘူးသီးတောင် မောင်တောမှ ဘင်္ဂလီများ တိတ်တဆိတ် ၀င်ရောက်နေဆဲဖြစ်
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များအတွင်းသန်းခေါင်စာရင်းကောက်ခံမည့်အစီအစဉ်နှင့်ပတ်သက်သောလက်ကမ်းလှုံ့ဆော်စာများဖြန့် ဝေလျှက်ရှိနေကြောင်း သာကေတမြို့နယ်တွင်းနေထိုင်သူများထံမှသတင်းရရှိပါသည်။ သာကေတ၊ လှိုင်သာ ယာ မြို့နယ်များတွင် မူစလင်များနှင့် ဌာနေ တိုင်းရင်းသားများ တစ်ဖက်နှင့် တစ်ဖက် ရန်ပြုခြိမ်းခြောက်မှုများ ရှိခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း မူစလင် ဘင်္ဂလီအများစုသည် မြန်မာတိုင်းရင်းသားများအပေါ် ညစ်ပတ်သော စိတ်ဓါတ် ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် တိုက်ခိုက်သွားရန် ပြင်ဆင်လာကြောင်းလည်း မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်နေ့ တစ်ခြမ်းပဲ့ ဗလီနှင့်နီးစပ်သော အသိုင်းအ၀ိုင်းများထံမှကြားသိရပါသည်။
ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်ရေးပါတီ ဆိုသောအမည်ဖြင့် ဘူးသီးတောင်၊မောင်တော ဖက်မှ ဦးကျော်မင်း (ယခင် ၉၀ ပြည်နှစ် ရွေးချယ်ခံ ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်း)ဦးစီးကာ ပါတီသစ် တစ်ရပ် ပေါ်ထွက်လာပါသည်။ အဆိုပါ ဦးကျော်မင်းသည် စစ်အစိုးရ လက်ထက်တွင် ဘင်္ဂလီ/ ရိုဟင်ဂျာများအတွက် ဘူးသီးတောင် မောင်တော နယ်မြေအား ၄င်းတို့ နယ်မြေအဖြစ် သတ်မှတ်ပေးရန်၊ ခွဲထွက်ပေးရန် တောင်းဆိုရေးသားမှုများ ကြောင့် စစ်အစိုးရ မှ တစ်သက်တစ်ကျွ န်းပြစ် ဒဏ် ချမှတ်ခံ ရပြီနောက် ဒီမိုကရေစီ ခေတ်တွင် ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာသူ တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းတို့ပါတီ၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် ဘင်္ဂလီ /ရိုဟင်ဂျာများအား တရားဝင်နိုင်ငံသား ဖြစ်မြောက်ရေးနှင့် ၄င်းတို့ အစ္စ္စလာမ်ဝါဒ မြန်မာ မြေပေါ်တွင် ထွန်းကားပြန်ပွား ရေး အတွက် အရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံ များ မှ ငွေကြေး အထောက်အကူယူကာ ဆောင်ရွက်သွားရေးပင် ဖြစ်သည်။ ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲ သော စိတ် ဓါတ်ဖြင့် လွှတ်တော် တွင်းနိုင်ငံရေး၌ ပါဝင်လာအောင် ဆောင်ရွက်လာခြင်းပင်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ ရွေးကောက်ပွဲအကြိုအဖြစ် နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ သန်းကောင်စာရင်းကို တိကျစွာကောက်ယူနိုင်ရေးအတွက် စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေချိန်တွင် အဆိုပါ အမျိုးယုတ် ဘင်္ဂလီ ရိုဟင်ဂျာ များမှလည်း ၄င်းတို့ကို ၄င်းတို့ ပသီ လူမျိုးဟု အမည်ခံကာ သန်းကောင်စာရင်း ကောက်ယူရာတွင် အမည်ပေးရေး တိုက်တွန်းထားသည့် လှုံဆော်စာများကို ဖြန့်ဝေရခြင်း ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရှိရပါသည်။ သို့သော် အာဏာပိုင်များမှ ၄င်းတို့ ပသီလူမျိုးဟု ထည့် သွင်းဖေါ်ပြခြင်းမရှိ အတင်းအကြပ် ဘင်္ဂလီ လူမျိုးဟု အမည်တပ်လာပါက နေပြည်တော် ဦးစီး(ရုံးချုပ်) ဖုန်း ၀၆၇-၄၃၁၀၁၆ / ၀၆၇-၄၃၁၀၄၄ များသို့တိုင်ကြားရန် စာသားများပါရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ရန်ကုန်မြို့တွင် နေ့စဉ် ရခိုင်ပြည်နယ်မှ တရားမ၀င် ၀င်ရောက်လာသော ဘင်္ဂလီများသည် တောင်ညွှန့်ဗလီ၊ တစ်ခြမ်းပဲ့ ဗလီများတွင် နေ့စဉ် ၂၀ ဦး ခန့် ခိုလှုံ လျှက်ရှိနေပြီး တောင်ညွန့်တွင် ငွေပေးကာ မှတ်ပုံတင် များ ပြုလုပ်ခြင်း၊အိမ်ထောင်စုဇယားများ တရားမ၀င်ပြုလုပ်ခြင်းများလည်း ရှိနေကြောင်းလည်း ဗလီများနှင့် နီးစပ် သော အသိုင်းအ၀ိုင်းများမှ သိရှိရပါသည်။ Posted by Kyaw Thura
by Messenger News Journal (Notes) on Monday, March 18, 2013 at 2:42am
လက်ပံတောင်းတောင်သပိတ်စခန်းများကို လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များက အင်အားသုံးဖြေရှင်းခဲ့ပြီးနောက် ဖြစ်ပေါ်လာသော နောက်ဆက်တွဲပြဿနာများနှင့် ဒေသခံများကြုံ တွေ့နေရသည့် ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းနိုင်ရန် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်တစ်ရပ်ကို နိုင်ငံတော်သမ္မတက ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့သည်။ အဆိုပါကော်မရှင်က ၄င်းတို့၏ အပြီးသတ်အစီရင်ခံစာကို မတ်လ ၁၂ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးနောက် ဒေသခံအချို့က အစီရင်ခံစာနှင့်ပတ်သက်၍ ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေး ရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် အစီရင်ခံစာနှင့် ပတ်သက်၍ ဒေသခံများနှင့် တွေ့ဆုံ ရှင်းပြမှုများပြုလုပ်ရာတွင်လည်း ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမှုအချို့နှင့် ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ ယင်းဆန္ဒပြမှုများ၏ နောက်ကွယ်တွင် ပြည်ပမှ အထောက်အပံ့များရယူ၍ လက်ပံတောင်းတောင်ဒေသခံများအား ကြိုးကိုင်လှုပ်ရှား နေသူ နိုင်ငံရေးအရ အမြတ်ထုတ်နေသူဟု စွပ်စွဲခံထားရသော ကိုဟန်ဝင်းအောင်နှင့်
တစ်ကြောင်းဆွဲကောက်ချက်နဲ့တော့ အပိတ် ပြော လို့မရဘူး။ နှစ်ပိုင်းတော့ရှိတယ်။ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်း လိုက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စဉ်းစားရမယ့်အချက်က နံပါတ်တစ်၊ နံပါတ်နှစ်က ကန့်သတ်လက်နက် သုံးစွဲမှု ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတဲ့ အဖြေရှာရမယ့်အပိုင်း နှစ်ပိုင်းရှိတယ်။ စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ရဲ့ အစီရင်ခံစာမှာ တင်ပြသလို အဆင့်ဆင့်ဥပဒေနဲ့အညီ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ အသိပေး ပြီးမှ ကျင့်ထုံးအရ ဝင်ရောက် ဖြိုခွင်းတယ်ဆိုရင် ဥပဒေနဲ့ညီတယ်ပေါ့ဗျာ။ ဒါဆိုရင် ကန့်သတ် ပစ္စည်းသုံး မသုံးဆိုတာ လေ့လာရမယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး အမေရိ ကန်နိုင်ငံက ဒေါက်တာရောလ်မန်တို့ ခွဲစိတ် သုတေသန လုပ်တာ၊ ထိုင်းနိုင်ငံက ဆင်းလာတဲ့အဖြေတွေကို စတဲ့ ကျွမ်းကျင်အလွတ်ပညာရှင်တွေ၊ နိုင်ငံတော် တာဝန်ပေး ချက်မဟုတ်တဲ့ ဟာတွေကတော့ ဖော့စဖရိတ် ဗုံးလို့ သတ်မှတ်ထားတယ်။ ဒီကတော့ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြော တယ်။ ဒါကတော့ သေသေချာချာ စုံစမ်းပြီးတော့ ပြော ရမှာပေါ့။ ကပစ ကနေ ထုတ်ပေးလိုက်တယ်လို့လည်း ပြောကြတယ်။ ဒါက အငြင်းပွားစရာရှိတယ်။ ကျွန်တော် ပြောချင်တာက လူထုရှုထောင့်ကနေ ပြောတာတွေ၊ အော် တာတွေ၊ တစ်ခုတည်းကိုကြည့်လို့ မရဘူး။ သပိတ်စခန်း တွေဖွင့်တယ်။ အကြိမ်ကြိမ်ဆန္ဒပြခွင့် ရှစ်ကြိမ်တောင်း တယ်။ တစ်ကြိမ်မှ မရဘူး။ ကုမ္ပဏီဘက်ကျတော့ လယ်မြေတွေသိမ်းတယ်။ ခွင့်ပြုချက်မကျတော့ ဆန္ဒပြဖို့ လိုတယ်။ မပြလို့ကလည်း
မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ကုမ္ပဏီက မြေသိမ်းတော့ ဒေသခံတွေက လမ်းမပေါ်ထွက်လာတဲ့ အကြောင်းကို ထည့်စဉ်းစားရတယ်။ အဲဒါတွေက ပြဿနာ တွေကြီးထွားလာတဲ့အခါကျတော့ စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်ဦးသာအေးက စီမံကိန်းနဲ့ ပတ် သက်ပြီးကြွေးကြော် တောင်းဆိုနေတဲ့ကိစ္စတွေကို ဆန္ဒပြမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်တာတွေကို သူ့အနေနဲ့ မဖြေ ရှင်းပေးနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်။ ပြည်ထောင်စုအဆင့်ကပဲ ဖြေရှင်းပေးနိုင်တာလို့ပြောတယ်။ ပြည်ထောင်စုအဆင့် Level ကလည်း လုံးဝမလာဘူး။ နိုဝင်ဘာ ၂၃ ရက်မှာ တော့ တစ်ကြိမ်လာတယ်။ ဦးအောင်မင်းရယ်၊ ပြည် ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးအမတ် ဦးသန်းမြင့် အဲတာပဲလာ တယ်။ ဒါတောင် ဖြေရှင်းသွားတာမဟုတ်ဘူး။ ဒေသခံ တွေရဲ့ ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမှုတွေ မကြာကြာအောင် အချိန်ဆွဲ ထားတဲ့ကိစ္စက မကြီးထွားရင် ကြီးထွားလာအောင်လုပ်ခဲ့ တဲ့ကိစ္စတွေ ဖြေရှင်းသင့်တယ်။ ဘယ်သူ့မှာတာဝန် ရှိသ လဲ။ စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ လမ်းပေါ်တက်လာတာမျိုးတော့ မဟုတ်ဘူး။ ဥပဒေအရမဟုတ်တော့ဘဲ တက်လာ အောင်ခွင့် မပြုပေးတာက ဘယ်သူတွေလဲ။ အဲဒါကြောင့် ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာတာ။ သပိတ်စခန်းတွေ ဖွင့်ကြတယ်။ အဲဒီမှာ ကုမ္ပဏီနဲ့ ပြည်သူ တိုက်ရိုက်ဆက်ဆံခိုင်း ပြီးမှ မြေသိမ်း မှုတွေလုပ်တယ်။ ပြည်သူက တိုက်ရိုက်မြေသိမ်း တာကို ဆန့်ကျင်တယ်။ အဲဒီလိုမျိုး ကုမ္ပဏီ၊ အစိုးရနဲ့ တိုက်ရိုက် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ပြဿနာမှာ ကြားခံပါ။
တပ်မတော်၏ လျှို့ဝှက်အပ်သော သတင်းအချက်များ မပေါက်ကြားစေရန် ထိန်းသိမ်းဆောင် ရွက်
အကြောင်းအရာ။ Social Network(Facebook, Twitter, Google+,etc) တို့အား သုံးစွဲ မှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တပ်မတော်၏ လျှို့ဝှက်အပ်သော သတင်းအချက်များ မပေါက်ကြားစေရန် ထိန်းသိမ်းဆောင် ရွက်ရေး
(က) Facebook, Twitter, etc account ၏ကိုယ်ရေးအချက် အ လက် များ(profile)အားဖြည့်စွက် ရာတွင် မိမိသည်တပ်မတော်မှ အရာရှိ / စစ်သည် ဖြစ်ကြောင်း၊ အဆင့်/တံဆိပ်များ ပါရှိသည့် စစ်ဝတ်စုံများ ဖြင့်ဖော်ပြခြင်းနှင့် ကိုယ်ပိုင်အမှတ်အဆင့်အမည် တပ်များ အား အမှန်အတိုင်း အသုံးပြု ခြင်း။
(ခ) Video Chat/chat Box များတွင်ဝင်ရောက်၍ စကားပြောဆိုခြင်း များပြုလုပ်ပါက တပ်မတော်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် လုံခြုံမှု အဆင့် အတန်းရှိသော လျှို့ဝှက်အကြောင်းအရာများအား ထည့်သွင်း ပြောဆိုခြင်း။
(ဂ) မိမိနှင့် ယခင်က ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခြင်းမရှိဘဲ Internet တွင်တွေ့ရှိသူ များအား Friend ပြုလုပ်၍ မိတ်ဆွေဖွဲ့ ပြီးလက်ခံ စကား ပြောဆိုခြင်း။
(ဃ) တပ်မတော်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ထူးခြားဖြစ်စဉ်များ၊ မသိသင့် မသိ ထိုက်သည့် ကိစ္စများအား အခွင့်မရှိဘဲပြောဆို ဖော်ပြခြင်း။
(င) တရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်/ဖော်ပြခြင်းမရှိသည့် တပ်မတော် အကြီး အကဲများနှင့် အရေးကြီး ပုဂ္ဂိုလ်များ၏လှုပ်ရှားသွားလာ မှုများအား ထုတ်ပြန်ဖော်ပြခြင်း။
၃။ သို့ဖြစ်ပါ၍အရာရှိ/စစ်သည်များအနေဖြင့် Social Networkအား
လုံးဝ(လုံးဝ)သုံးစွဲခြင်းမပြု ရန်၊လက်ရှိ အသုံးပြုနေပါက ပယ်ဖျက် ရန်၊ မိမိအမည်အကြောင်း အရာ ဓါတ်ပုံများအား ဖော်ပြ အသုံးချ၍ Social Networkတွင်မဟုတ်မမှန် သတင်းများ ထုတ်ပြန်ဖော်ပြနေ သည်ကို သိရှိရပါက တင်ပြသွားရန် ………………….
---------------------------------------လိုက်နာမှု မရှိပါက စစ်စည်း ကမ်း အရအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း------------------။
ငရဲ သား's status. 47 minutes ago
တပ်မတော်သားတွေ ဖွဘုတ်မသုံးရ ထုတ်ပြန်တာ ကောင်းသလိုတော့ ရှိသား..။
နို့မို့ဆို ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ် လှန်ထောင်းနေကြတာကိုး ...။
MI 35 ပျက်ကျတုန်းက သက်ဆိုင်ရာက ဘာမှ မထုတ်ပြန်ရသေးဘူး...။
ဖွဘုတ်ထဲမှာ .... ကျဆုံးရဲဘော်ကို by name နဲ့ အလေးပြုနေပြီ....။
လေယာဉ်နဲ့ တိုက်တယ်လို့ သက်ဆိုင်ရာကမကြေညာသေးဘူး..။
K8 ဆိုတဲ့ လေယာဉ်မော်ဒယ်နံပါတ်က ဖွဘုတ်မှာ ပလူပျံလို့ ...။
ဒီကြားထဲ ... Google map တွေ တင်ပြီး ....မတိုက်ချင်လို့ မင်းတို့ကို ..လက်နက်ကြီး ပစ်မှတ် မှတ်ပုံတင်ပြီးပြီ ဆိုတာက ကြွားလိုက်သေး...။
အထက်က ဖုံး ..... အောက်ကဖော်.....။
သူတို့ကြောင့် မကြေညာချင်ပဲ ကြေညာလိုက်ရတာတွေလည်း ရှိချင် ရှိမှာပဲ..။
တော်တော် .... ရင့်ကျက်ခဲ့ကြတာကိုး...။
ကေအိုင်အေနဲ့ တိုက်တဲ့စစ်ပွဲက information war မှာ တပ်မတော်ကို ကောင်းကောင်း သင်ခန်းစာ ပေးခဲ့တာတော့ အမှန်ပဲ..။